03/19/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Tuesday, March 19, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ဒီနေရာ မှာတော့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး ရဲ့ စကားကို ပြတ်ပြတ် သားသား ထောက်ခံ ပါတယ်။အမေရိကန် မှာလဲ မက္ကဆီ ကန်တွေ ခိုးဝင်တာ မိရင် ဥပဒေ အရ အရေးယူတာပဲ။
အမေရိ ကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ရခိုင်ပြည် နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ များကို နိုင်ငံသား တဦး ကဲ့သို့ အခြေခံ လူ့အ ခွင့် အရေးများ ပေးအပ် သင့်သည် ဆိုသော ပြောဆို မှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသော အသုံးအနှုန်း ကို မြန်မာ အစိုးရက လက် မခံကြောင်း နယ်စပ်ရေး ရာ လုံခြုံရေး ၀န်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး က ပြောဆို လိုက်သည်။
“ရိုဟင်ဂျာ အဖြစ် စာရင်းသွင်းဖို့ တောင်းဆိုတာက တထောင်မှာ တရာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လ၀က က စစ်လို က်တော့ အဖေက လည်း ဘင်္ဂါလီ၊ အမေ ကလည်း ဘင်္ဂါလီ၊ သားသမီး ကျမှ ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်ချင် တာက ဆန္ဒ စွဲတွေ ဖြစ် ပါတယ်” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ဆိုသည်။
မြန်မာ စကား၊ ရခိုင်စကား မတတ်တဲ့ စိမ့်ဝင် ဘင်္ဂလီ တွေက ဒီမှာမွေးတယ် ပြောရုံနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင် ဘူးဗျ။ ကမန်လို့လဲ မပြောနဲ့။ ရခိုင်ပြည် နယ် တခုလုံးမှာ နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂလီ တွေ ခွဲ ထုတ်ပြီး စိမ့်ဝင် ကျူးကျော် ဘင်္ဂလီ တွေကို နယ်စပ်မှာ (သြစီမှာ လုပ်သလို ကျွန်းတ ကျွန်းပေါ် မှာ ဖြစ်ဖြစ်) ဒုက္ခသည် စခန်း ဖွင့်ပြီး လက်ခံနိုင်တဲ့ တတိယ နိုင်ငံတွေ ကို ပို့သင့် ပါသည်။
ပြည်တွင်းက မြန်မာ မွတ်စလင် တွေကလည်း ဘင်္ဂလီ စိမ့်ဝင်မှု တားဆီးရေးကို ဘာသာ ရေးကြာင့် နှိပ်ကွပ် တယ်လို့ မမြင် သင့်ဘူး။ ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာ မွတ်စလင် များက တဖက် နိုင်ငံမှ စိမ့်ဝင် လာသော နိုင်ငံခြား သား ဘင်္ဂလီများ ကို ပြစ်တင် ရှုံ့ချ ခြင်းဖြင့် ပြည်ချစ် စ်ိတ် ဓာတ်ကို ဖော်ပြသင့် ပါသည်။ ဘင်္ဂလီများနှင့် မြန်မာ တိုင်းရင်း သားများမှာ သိသာစွာ ကွဲပြားပါ သည်။ မြန်မာ မွတ်စလင်နှင့် တဖက် နိုင်ငံမှ ၀င်လာသူ ဘင်္ဂလီ များကိုလည်း လွယ်ကူစွာ ခွဲခြားနိုင် ပါသည်။
နယ်စပ် တိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု တားဆီးရေး ဘယ်စီမံချက်မှ အောင်မြင်တာ ၁၀၀% မရှိဘူး။ India မှာလည်း ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည် ၁သန်းလောက်ရှိပြီး သူတို့ကို နိုင်ငံသား မပေးဘူး။ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ မွေးချင်တိုင်း မွေးနေတဲ့ ကလေးတွေကို လည်း နိုင်ငံသား မပေးဘူး။ အမေရိကန်မှာလဲ မက္ကဆီ ကန်တွေ ခိုးဝင်တာ မိရင် ဥပဒေအရ အရေးယူတာပဲ။ ဘင်္ဂလီကတော့ နယ်စပ်ချင်း မကပ်တဲ့ သြစီ (Australia) ကိုတောင် လှေနဲ့ ခိုးဝင်ဘို့ ကြိုးစားလို့ ကျွန်းတွေမှာ ပို့ထားတယ်။ မြန်မာတွေလည်း တခြားနိုင်ငံ တွေ တရားမ၀င် သွားအလုပ်လုပ်ရလို့ အဲဒီ့အိမ်ရှင် နိုင်ငံသား ခံယူခွင့်ပြုဘို့ ဘယ်သူမှ မတောင်း ဆိုဘူး။ တောင်းဆိုသူ ကိုလဲ မြန်မာနိုင်ငံသားမို့ ဗုဒ္မဘာသာ ချင်းမို့ဆိုပြီး ဘယ်သူကမှ ထောက်ခံ မပေး ဘူး။ မရလို့ မတရားဘူး လို့လဲမပြောဘူး။
အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ ခွင်ပြုလို့ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရတာ၊ မရတာ သူနိုင်ငံ သူ့ဥပဒေအရ သူ့သဘောပဲ။ တည် ဆဲ ဥပဒေနဲ့ ဘောင်ဝင်ရင် နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရ ကြ တယ်။ ဘောင်မ၀င်ရင် မရဘူး။ အိမ်ရှင် နိုင်ငံတွေ ကလည်း ဥပဒေခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အကန်အသတ်မဲ့ လက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံမှ တည်ဆဲ ဥပဒေခွင့်ပြု ချက် မရှိပဲ နိုင်ငံခြားသားကို အကန်အသတ်မဲ့ လက်ခံတာ မရှိဘူး။ တရားမ၀င် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း သူတွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ အိမ်ရှင် နိုင်ငံက ပြန်ပို့ လိုက်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ပြန်လက်ခံ ရတယ်။ တရားဝင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရှိလို့ မြန်မာ နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ မြန်မာပြည် မှာ အများကြီး။
Basic principal of Ethic က Rules of Law ပဲ။ ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီး အခွင့်အရေး စကားပြော၊ အခွင့် အရေး ယူချင်လို့ မရဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ပြောတာ လက်တွေ့ စမ်းလို့ရတယ်။ မြန်မာပြည်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တယောက် မွတ်စလင်နိုင်ငံတခုကို တရားမ၀င် သွားပြီး နိုင်ငံသားခံခွင့် ကြိုးစားကြည့်လိုက်။ တရာမ၀င် ကလေး တယောက် ယူပြီး သူ့နိုင်ငံသား ဖြစ်မလား ကြိုးစားကြည့်။ သူ့ နိုင်ငံသားခံခွင့် မရနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ မြန် မာပြည် မှာ လက်ရှိ ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသူ နဲ့ နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူ ခွဲခြားစီရင်တာ Ethic အရ မှန် တယ်။ ဥပဒေအရ စီရင်ခြင်းထက် ပိုပြီး အခွင့်အရေး လိုချင်လို့ မရမှန်း သိရက်နဲ့ မသိချင်ရောင် ဆောင် ဥပဒေဘောင် ကျော်ပြီး ဥပဒေမဲ့ စိမ့်ဝင်ကျူးကျော်သူ ဘင်္ဂလီ တွေအတွက် ဘာသာရေး အခြေခံ စိတ်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေး စကားပြောပေးနေတာက မျိုးမစစ်လို့ ပြည်ချစ်စိတ် မရှိတာပဲ။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ် နှစ်ခုမှ ပိုင်ရှင်မဲ့ လက်လုပ် တူမီးလုပ် သေနတ်များ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သိမ်းဆည်း ရမိ
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ် နှစ်ခုမှ တစ်ပတ် အတွင်း ပိုင်ရှင်မဲ့ လက်လုပ် တူမီး လုပ်သေနတ်များ အစု လိုက် အပြုံ လိုက် သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျောက်တော် မြို့နယ်၊ မာလာကျေးရွာနှင့် မျောက်တောင် ကျေးရွာကြား ပြိုင်လောင်း တောင်တန်း အနီး တောစပ်ခြုံ တောမှ တူမီးလုပ် သေနတ် ၂၈ လက် အား ပိုင်ရှင်မဲ့ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ပြီး အလားတူ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်လည် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ လက်ဝဲ ဒက်ပြင် ရှည်ကျေး ရွာ အုပ်စု၊ ညောင်ခြုံ ကျေးရွာ အနီး တောင်ကျော် လမ်းဘေးခြုံစပ် အတွင်း တူမီး လုပ်သေနတ် ၁၈ လက် ကို ဘူးသီး တောင် ရဲစခန်း လှည်းကင်းမှ ပိုင်ရှင်မဲ့ သိမ်းဆည်း ရမိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း အပြင် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီတွင် ကျောက်တော် ရဲစခန်းမှ လှည့်ကင်း ဆောင်ရွက်စဉ် ကျောက် တော်မြို့နယ်၊ ငါးဆောင် ဘက်ကျေး ရွာ အနောက်ဘက် အာလာတောင်ခြေရင်း တောတန်း ခြုံထဲမှ တူမီး လုပ် သေနတ်၂၉ လက်အား ပိုင်ရှင်မဲ့ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
လက်နက် များကို ကျောက်တော် မြို့နယ်နှင့် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ် အတွင်းမှ ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း ဖြစ်ပြီး သုံးရက် အတွင်း ပိုင်ရှင်မဲ့ တူမီး သေနတ် ၇၅ လက်အား ရဲတပ်ဖွဲ့ များမှ ကင်းလှည့်စဉ် တွေ့ရှိ ရခြင်း ဖြစ် သည်။ ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်ကြိမ် တိုင် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ပဋိပက္ခ များကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်း နိုင်ရန် အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့ မှ စတင်ပြီး တရား မဝင် ကိုင်ဆောင်သော လက်နက် နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို နီးစပ်ရာ ရဲစခန်း၊ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ များထံသို့ သတ်မှတ် ရက် အတွင်း အမြန် ဆုံး အပ်နှံ စေခဲ့ရာ ရခိုင်ပြည် နယ် အတွင်းမှ တူမီး (၇၂၆)လက်၊ ဓါး (၁၃၀) လက်၊ လှံ (၅၀၆) လက်၊ လေး (၁၁၂)လက်၊ မြှား (၆၁၁) ချောင်း၊ ဂျင်ကလိ (၁၄၀၈) ချောင်းနှင့် လေးခွ (၃၉၈) လက်နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်း တို့အား လာရောက် အပ်နှံခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ် ရဲတပ် ဖွဲ့မှူးရုံး မှသတင်း ထုတ်ပြန် ထား ချက်အရ သိရသည်။
သတင်းမှားဟု စွပ်စွဲခံရသည့် 1st Music News ဂျာနယ်နှင့် အာကျယ် မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ ပြဿနာ
Posted by drmyochit Tuesday, March 19, 2013, under သတင်းများ | No comments
“မသွဲ့သွဲ့ဝင်း သတင်းမှား ရေးသားသူ မုံရွာမောင်သုံ နှင့် The First Music News- ဂျာနယ်အား မသွဲ့သွဲ့ ဝင်းက ရှင်းလင်း ခွင့်ပြန်တောင်း”
The First Music New- ဂျာနယ် အမှတ်(၃၂၆) ၁၉-၃-၂၀၁၃- ရက်စွဲပါ “မြောက်ပိုင်း ပါချောင်ဒေသမှာ ကျောင်း သားအများအပြားကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အမှုမှာ တာဝန် မကင်းသူ ABSDF-က နိုင်အောင်၊ ဇနီး ခင်ဥမ္မာ နဲ့ မိုးသီးဇွန် တို့က ကမကထပြုပြီး လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စံမံကိန်း သပိတ်က- မသွဲ့သွဲ့ ဝင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ ဖိတ်ခေါ်ကာ (၁၂)ကြိမ်မြောက် အမျိုးသမီး နှီးနှောဖ လှယ် ပွဲ တက်ရောက်ေ စခဲ့ကြောင်း သိရ”
ခေါင်းစဉ်နှင့် ရေးသားထားသော သတင်း အချက် အလက် များမှာ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းနှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်သော သတင်း မှားများ ဖြစ်နေကြောင်း၊ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းမှာ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထွက်ပြီးသည်မှ ယနေ့ အချိန်ထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမှုမရှိသေးကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂုံတော၊ ကံကုန်း၊ ကျော် ရွာ၊ ဝက်မှေး၊ ကန်တောရွာသစ်၊ တုံသပိတ်စခန်း၊ ဆည်တည်း၊ ဇီးတော၊ မိုးကြိုးပြင်သုံးရွာနှင့် ဝမ်ေ ပါင် ကုမ္ပဏီတို့သို့ (၂)ရက်ခရီးစဉ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ နေထိုင်ရာ ဝက်မှေးရွာေ ဟာင်း သို့ မလာရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်မရှိသလို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ဆန္ဒပြရာတွင်လည်း ဝက်မှေးရွာဟောင်း မပါဝင်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်တွင် အတူ လိုက်ပါလာသော NLD-ဦးစိုးဝင်းက “ညည်းတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် ဦးဆောင်ပြီး ဒေါ်စုကို ဆန္ဒပြ တာလား-ဟု ဖုန်းဆက်၍ မေးကြောင်း၊ ကျွန်မတို့ ရွာက ဆန္ဒပြရာတွင်လည်း မပါကြောင်း၊ ကျွန်မတို့ ကိုယ် တိုင် လည်း ဆန္ဒပြရာတွင် မပါဝင်ကြောင်း၊ ပြန်ပြောမှ NLD-ဦးစိုးဝင်းက ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း” အထင်အမြင် လွဲမှားမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်စုကိုလေးစားကြောင်း၊ ဒေါ်စုကသာ ဒီလိုအဖြေ မထုတ်ခဲ့ရင် ရွာသူရွာသားတုိ့ ဆင်းရဲတာရှည်နိုင်ကြောင်း၊ ဒေါ်စုကို ကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်း ဦးဝီရသူ လာရောက်လျှောက်ထား ပါသည်။ ထို့အပြင် ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကို မမြင်ဖူးသလို အဆက်အသွယ်လည်း မရှိကြောင်း ထပ်မံ လျှောက်ထားလာပါသည်။
အများပြည်သူ တို့ အထင် အမြင် လွဲမှားအောင် သတင်းမှား များပေး ပို့သော မုံရွာ မောင်သုံနှင့် အဆိုပါ ဂျာ နယ်လ် -တို့အား တရားဝင် ပြန်လည်တောင်းပန် ခိုင်းဖို့ ဆန္ဒရှိကြောင်းလည်း ဆက်လက်လျှောက်ထား ပါ သည်။
“The First Music News- ဂျာနယ်၏ တုန့်ပြန်ချက်”
ယနေ့ (၁၈-၃-၂၀၁၃- pm ၁၂း၁၅-နာရီခန့်က) ၎င်းဂျာနယ်တိုက် ဖုန်း-၀၁-၃၇၈၀၉၀-သို့ ဆက် သွယ်ပြော ကြား ရာ အယ်ဒီတာ ချုပ်မရှိသေး၍ နောက်တစ် နာရီအကြာမှာ ပြန်ဆက်ပါ ဟု ဆိုပါသည်။
(၁း၅၀)ခန့်မှာ ပြန်ဆက်ရာ ဆရာတော် ဦးဝီရသူကို လေးစားကြောင်း၊ မသွဲ့သွဲ့ဝင်း ကိုတော့ လုံးဝ မတောင်း ပန်နိုင်ကြောင်း၊ မသွဲ့သွဲ့ဝင်း တို့ရွာသား (မုံရွာသား)များ ကိုယ်တိုင် ပေးပို့တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အထော က်အ ထားနှစ် ခု အခိုင် အမာ ရှိကြောင်း၊ ပြန်လည်ပြော ကြား ပါသည်။ မသွဲ့သွဲ့ဝင်း အနားမှာ ရှိတယ် ပြောဦးမ လား မေးသော်လည်း ဖုန်းချသွားပါသည်။
မသွဲ့သွဲ့ဝင်းက လုံးဝမကြေနပ်ပါ။ သူလုံးဝမပြောဖူးပါဟု ဆိုပါသည်။
ခင်ပွန်း ၅ ဦး တပြိုင်တည်း ပေါင်းသင်းနေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး
Posted by drmyochit Tuesday, March 19, 2013, under ထူးခြားဆန်းပြား | No comments
လောကကြီးမှာ ထူးဆန်းတာတွေ ရှိတတ်ကြ ပါ တယ်။ ဒါကိုပဲ သဘာဝ လွန်ဖြစ်ရပ်တွေလို့ ပြောကြ တာပါ။ ဒီနေရာမှာ ယောင်္ကျားတဦးက ဇနီး ၄ ၊ ၅ ဦးကို တပြိုင် တည်းလက် ထပ်ပေါင်း သင်းနေ တယ် ဆိုတာ မထူး ဆန်းပေ မယ့် မိန်းမ တဦး က ခင်ပွန်း ယောင်္ကျား ၅ ဦးတပြိုင်တည်း ပေါင်းသင်း တယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး ကေ တာ့ ထူးဆန်း မနေဘူး လား။
ဒီ လိုထူး ဆန်းမှု ကတော့ က မ္ဘာပေါ်မှာ တကယ် ရှိနေ ပါ တယ်။ သူကတော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံက အသက် ၂၁ နှစ် အ ရွယ် ရှိတဲ့ မစ္စ ရာဂျို ဗာမာ ဆိုသူ အမျိုး သမီးပါ။ သူကတော့ ခင်ပွန်းသည် ၅ ဦးနဲ့ အလည်ကျ တညစီနေ ပါ သတဲ့။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ၅ ဦးလုံး က လည်း ညီအ ကိုတွေဖြစ်နေတာပါလို့ The Sun အွန်လိုင်း သတင်းစာ မှာဖော်ပြ ထားပါတယ်။
ရင်ခွင်ထဲ ပွေ့ချီထားတဲ့ သားငယ် လေးဟာ ဘယ်အဖေနဲ့ မွေးတယ် ဆိုတာတောင် သူမသိရပါဘူး လို့ ပြော ပါ တယ်။
“ကနဦးပိုင်းတော့ နည်းနည်း ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သလို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ယောင်္ကျား တ ဦး တလေကိုမှ ကျမက မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး” လို့ မစ္စ ရာဂျိုဗာမာ က ပြောပါတယ်။
မစ္စ ရာဂျိုရဲ့ ပထမဆုံး သတို့သား တဦးဖြစ်ခဲ့သူကတော့ အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စ ဂတ်ဒူဆိုသူပါ။
“ကျနော်တို့အားလုံးက သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မနာလိုစိတ်မရှိဘူး။ ကျနော်တို့က တ ကယ့် မိသားစုကြီးဖြစ်နေတာကိုး” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
သူတို့ ၂ ဦးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်က ဟိန္ဒူရိုးရာနဲ့ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲပါ။ တရား ၀င် အားဖြင့် သူတို့ ၂ ဦးဟာ အကြင်လင်မယားအဖြစ် စတင်ပေါင်းသင်းခဲ့သူတွေပေါ့။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရွာဓလေ့အရ မစ္စ ရိုဂျာဗာမာဟာ မဖြစ်မနေပဲ သူ့ပထမဆုံး ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ညီအကိုတွေ ဖြစ် တဲ့ ဘာဂျူ ( အသက် ၃၂ နှစ်)၊ ဆန့်ရမ် ( အသက် ၂၈ နှစ်)၊ ဂိုပါလ် ( အသက် ၂၆ နှစ်) ကို ခင်ပွန်းေ တွ အဖြစ် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရပါတယ်။
ဒီအပြင် မနှစ်ကမှ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ခဲ့လို့ နောက်ဆုံး လက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ သူကတော့ ဒိုင်းနဲရ်ှပါပဲ။
အကြီးဆုံး အကိုကြီးဖြစ်သူ ဘာဂျူးက ပြောတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
“ကျနော့်မိန်းမအဖြစ်နဲ့ သူကို စဉ်းစားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့်ညီတွေလိုပဲ သူနဲ့ အိပ်တာပဲ” လို့ ပြောပါ တယ်။
ရာဂျိုက ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြောင်း၊ ခင်ပွန်းသည်တွေက အလုပ်အကိုင်ရှိတဲ့ အိန္ဒိ ယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေရာဒန်အရပ်မှာ သွားနေခိုက် အိမ်က ၁၈ လသားအရွယ် ဂျေး ဆိုတဲ့ ကလေး ကို လည်း ထိန်းသိန်း စောင့်ရှောက်ပါသေးတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
မစ္စရာဂျိုက ပိုလီယန်ဒရီလို့ ခေါ်တဲ့ ရှေးရိုးရာအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
“ကျမအမေကလည်းပဲ ဒီလိုပဲ ညီအကို ၃ ယောက်ကို လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။ ကျမ လက်ထပ်တုန်းကလည်း သူ တို့ ညီ အကိုတွေ အားလုံးကို ကျမ ခင်ပွန်းတွေအဖြစ် ကျမလက်ခံရမယ်ဆိုတာ ကျမ သိပြီးသားပါ” လို့ ရာ ဂျို က ဆိုပါတယ်။
“ကျမကတော့သူတို့နဲ့ အလှည့်ကျ အိပ်တယ်။ ကျမတို့မှာက ကုတင်တွေ၊ အိပ်ရာတွေ မရှိဘူးလေ။ ကြမ်းပြင်ပေါ် စောင်တွေများများခင်းလိုက်တာပဲ” လို့ ရာဂျိုက ဆိုပါတယ်။
ပြီးတော့သူက ဆက်ပြောတာကို စာဖတ်သူများ ပိုစိတ်ဝင်စားမယ် ထင်ပါတယ်။
“မယားတွေ အများကြီးရှိတာမျိုးထက်စာရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမက ပိုလို့တောင် ဂရုစိုက်မှု ခံ ရသေး တယ်” လို့ ရာဂျိုက ဆိုပါတယ်။
သူတို့ ဓလေ့၊ သူတို့ရိုးရာများ အံ့ပါရော။
ဓာတ်ပုံ - ခင်ပွန်း ၅ ဦးနဲ့ သားတဦးကို ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေတဲ့ မစ္စ ရာဂျို
“မျက်မမြင် မိခင်အား လုပ်ကျွေးနေသူ မိန်းကလေး တစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့် လုယက် သတ်ဖြတ်ခံရမှုအပေါ် ဒေသခံများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်”
မန္တလေး တိုင်းဒေ သကြီး တံတားဦး ရဲစခန်း ရှေ့တွင် မတ် ၁၁ ရက် နံနက်က မျက်မမြင် အသက် ၇ဝ ကျော် မိခင်အား လုပ်ကျွေးနေသူ မိန်းကလေး တစ်ဦး အသတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ၏ တောင်းဆို ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှု တစ်ခု ဖြစ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ် စဉ်မှာ မတ် လ ၈ ရက်နေ့တွင် တံတားဦး မြို့ရှိ မြင်းဝန် သုသာန်ထဲတွင် လူသေ အလောင်း တစ်လောင်း တွေ့ရှိ ခဲ့ပြီး အဆိုပါ လူသေ အလောင်းမှာ တံတားဦး မြို့ တွင်နေထိုင်သူ မစန်း စန်း ဝင်း (ခ) မဂွတို ဖြစ်ကြောင်း၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ လူသတ်ကာ လုယက် မှုများ ကျူးလွန်ခံ ထားရပြီး တရားခံဆိုသူအား အဆိုပါနေ့ တွင် နေ့ ချင်း ဖမ်းမိကြောင်း သိရသည်။
လူသတ်တရားခံဟုယူဆရသူကို….အား မြို့သာ မြို့ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် သေဆုံးသူထံမှ ရယူထား သည့် နားကပ်၊ လက်စွပ်နှင့်အတူ ဖမ်းမိထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် သူများသည် အဆိုပါ တရားခံ ဆိုသူမှာ တပ်မတော်မှ ဒုတပ်ကြပ် တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရား ရုံးတွင် စစ် ဆေးမည်ကို စိုးရိမ်၍ အရပ်ဘက် တရားရုံးတွင်သာ စစ်ဆေးစေ လိုကြောင်း စာတန်း များ၊ သေဒဏ်ပေးစေလို သောစာတန်းများပါဝင်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင် ကာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသူ မစန်းစန်းဝင်း (ခ) မဂွတိုမှာ မျက်မမြင် အသက် ၇ဝ ကျော် မိခင်အား လုပ်ကျွေးနေပြီး အတန်း ပညာ ကောင်းစွာမရှိခြင်း၊ စကားမပီခြင်း၊ ခေါင်းရွက် ဈေးသည် အဖြစ် ဈေးလှည့်လည်ရောင်းကာ ကြုံရာ ကျပန်း လုပ်ကိုင်ပြီး မိခင်အား လုပ်ကျွေးနေသူ ဖြစ်သောကြောင့် စာနာစိတ်ဖြင့် ယခုလို တောင်းဆို ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ရာတွင် ပါဝင်သူများထံမှ သိရသည်။
”ဒါမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီအမျိုးသမီးက မိခင် မျက်မမြင်ကြီးကို လုပ်ကျွေးနေတာ။ စာတောင် ကောင်းကောင်း တတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သတ်တဲ့သူကို သေဒဏ်ပေးသင့်တယ် ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တံတားဦးမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ တရားခံအား ပုဒ်မ ၃ဝ၂၊ ၃၉၂ တို့ ဖြင့် အရေးယူထားပြီး တရားခံအား ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း၊ ဥပဒေ အတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ကျ ရဲမှူးက ပြောသည်။
”ဒီအမှု အတွက် အထက်ကတော့ ဘာမှ မညွှန်ကြားသေးဘူး။ မနက်က သူတို့ဆန္ဒကို တောင်းဆိုတဲ့လူ ပါသလို တရားခံကို ရုံးထုတ်မယ်ဆိုလို့ မြင်ဖူးချင်လို့ လာကြည့်တဲ့ သူတွေလည်းပါတယ်။ ဥပဒေအတိုင်း လုပ်ဆောင် သွားမှာပါ” ဟု အဆိုပါရဲမှူးက ပြောသည်။
ဟမ်းဖုန်း နှစ်လုံး ပျောက်ပြီး ခွေးကိုက် ခံလိုက်ရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Posted by drmyochit Tuesday, March 19, 2013, under အနုပညာ | 1 comment
“ကံဆိုးမ သွားရာကို မိုးလိုက်ရွာတယ်” ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ ဆိုရိုး စကား ရှိပါတယ်။ အခု လတ်တလော အဲဒီဆိုရိုးနဲ့ ညီမျှခြင်း ကျနေ သူကတော့ မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော် ပါပဲ။ သင်ဇာ ၀င့်ကျော်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တုန်းက ခွေးကိုက် ခံရတဲ့ အတွက် ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ နေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ဟမ်း ဖုန်း နှစ်လုံး ပျောက်သွား တယ်ဆိုတော့ “နူရာ ၀ဲစွဲ လဲရာ သူခိုးထောင်”လို့ ပြောရလေတော့မလား မသိတော့ ပါဘူး။
သင်ဇာဝင့်ကျော်ဟာ ရုပ်ရှင် ကားကြီးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်နဲ့ ထပ်တူ မကျ တာတွေ ရှိနေတာကြောင့် စိတ်တိုင်းလည်း မကျ ဖြစ်လို့ နေပါတယ်။ မှော်ဝင် ကျားသစ် ဇာတ်ကား တုန်းက ကျားသစ်တစ်ကောင်လို ထူးထူးဆန်းဆန်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အနု ပညာ ဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုတွင်းထူးခြားတဲ့ ကာရိုက်တာ တစ်ခုလို့ ဆိုကြရမှာပါ။ လက်တလောမှာတော့ ကားကြီး ရိုက်ထားတာ မရှိသေးဘူးလို့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က ဖွင့်ဟ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်း လက်နက်တင်ပို့မှုမှာ အခုနောက်ဆုံး ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကို ကျော်လွန်ပြီး နံပါတ် ၅ နေရာအထိ ရောက် လာ တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို တင်ပို့မှုမှာတော့ ထိပ် ဆုံး အဆင့်မှာ ရှိနေတဲ့အကြောင်း နိုင်ငံ တကာ လက်နက်ရေး ရာ ဆန်းစစ်မှုအဖွဲ့တခုက ပြော လိုက်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ကတော့ လက်နက် တင်ပို့မှု ဟာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေ နဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်နေတာသာဖြစ် တယ်လို့ ပြော ဆိုခဲ့ တာပါ။ အပြည့် အစုံ ကိုတော့ ကိုကျော်သိင်္ခက ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့လက်နက် တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ ဈေးကွက်မှာ အဆင့် ၅ နေရာ ကို ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အကြောင်း ဆွီဒင်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Stockholm နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး သုတေ သနဌာန (SIPRI) က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ နံပတ် ၅ အဆင့် ရှိပေမဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို လက် နက် တင်ပို့ ရောင်းချမှု မှာတော့ ထိပ်ဆုံးအဆင့်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေရာယူထားတယ်လို့ SIPRI ရဲ့ နိုင်ငံ တ ကာ လက်နက်လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူ မခ့် ဘရွန်လေ (Mark Bromley) က ပြော ပါ တယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ဆီက လက်နက်တွေ ၀ယ်ယူရာမှာ အဓိက ကျတဲ့ နိုင်ငံဖြစ် ပါတယ်။ အရင် အချိန် ကာလတွေ ကတည်းက တရုတ်က မြန်မာပြည်ကို လက်နက် အမျိုး မျိုးကို ရောင်းချနေ ခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့ တဲ့ ၅ နှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက် ထောက်ပံ့နေတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံက နံပါတ် ၁ ဖြစ် တယ် ဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ - ရေယာဉ်ပေါ်ကနေ ပစ်လွှတ်နိုင်တဲ့ ဒုံး ကျည် လက်နက် မျိုးတွေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း လက်နက်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အပို ကိရိယာ တန်ဆာပ လာတွေ ကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ထဲမှာ ရုရှားနိုင်ငံလည်း ပါပါတယ်”
တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အထိ တရုတ်နိုင် ငံက နိုင်ငံတကာကို လက်နက်လွှဲပြောင်း တင်ပို့မှုတွေထဲ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပို့ဆောင် ခဲ့တာ တွေ့ရှိရတဲ့အကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာ့ အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ တရုတ်နိုင်ငံက စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမို ကရေ စီရေး တောင်းဆို အုံကြွမှုတွေကို စစ်တပ်က သွေးထွက် သံယို နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပိုပြီး ၀င်ရောက် လာတယ်လို့ သုံးသပ်နေကြ တာပါ။
အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေက လက်နက်ရောင်းချမှု တားမြစ်တာတွေ အပါအ၀င် အရေးယူ ဒဏ်ခတ် မှုတွေကြောင့် အလွယ်တကူ ရနိုင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဘက် ဦးလှည့် လာတာလို့လည်း ပြည်ပအခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အင်အားစု (NDD) ရဲ့ မှတ်တမ်းနဲ့ သုတသနဌာနက စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးဋ္ဌေးအောင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ၈ လေးလုံးပြီးခါစ ကာလမှာပေါ့။ တခြားနိုင်ငံတွေကလည်း ဒီလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတွေ မလုပ်ကြဘူးလေ။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ တရုတ်နိုင်ငံက လက်နက်တွေကိုဈေးပေါပေါ ရတာလည်း ပါတာပေါ့လေ။ နောက် တခုက တရုတ်အစိုးရက ဗမာအစိုးရကို ဒီစီးပွားရေးအရရော၊ နိုင်ငံရေးအရရော အကူအ ညီပေးတဲ့ အပေါ်မှာ ပါတာပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့က တရုတ်နိုင်ငံက လက်နက်တွေကို အဓိကထားပြီးတော့ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲ ခဲ့တဲ့ အနေအထားရှိတယ်။”
“တရုတ်နိုင်ငံက ကျနော်တို့ ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်၊ လက်နက်တွေ စရောင်းတာပေါ့နော်၊ ဒီ ၈၈ နောက် ပိုင်း၊ အနောက်နိုင်ငံတွေ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေရော၊ လက်နက် ရောင်းချမှု ပိတ်ဆို့မှုတွေရော အရေး ယူမှုတွေ စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့လေ၊ ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်နက် မရနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ တရုတ်နိုင် ငံကနေ လက်နက်တွေ နှစ်စဉ်ပေါ့နော် ဘီလီယံ နဲ့ ချီပြီးတော့ ၀ယ်ယူခဲ့ရတဲ့ အနေအထား ရှိတယ်။ အဲ့ဒီတည်းကနေ စပြီးတော့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ လက်နက်တွေ စပြီးတော့ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲလာ ရတာပေါ့။ အခု နောက်ဆုံး အခြေအနေအထိ တရုတ်နိုင်ငံက လက်နက်တွေကို ၀ယ်ယူ သုံးစွဲနေတဲ့ အနေအထား ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်”
တရုတ်အစိုးရကတော့ လက်နက် ရောင်းချမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက် တွေကို လူသိရှင်ကြား တရားဝင် ထုတ်ပြန်လေ့တော့ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်း လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုမှာ အဆင့် ၅ ရှိလာ တယ်ဆိုပြီး SIPRI ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်လာပြီးနောက်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လက်နက်တင်ပို့မှုတွေဟာ နိုင်ငံ တကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီသာ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ငြိမ် ပျက်ပြားအောင် လုပ်ဆောင်တာမျိုး မရှိဘူးလို့ တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူ ဟောင်းလီ (Hong Lei) က ဘေဂျင်းမြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
“တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်း တာဝန်ယူမှုနဲ့ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် လုပ်ခဲ့တာ ချည်းပါပဲ။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေအရ ပြည်တွင်းမှာ ထားရှိတဲ့ တင်းကြပ် တဲ့ ဥပဒေတွေကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်နေတာပါ။ လက်နက် တင်ပို့ရောင်း ချတဲ့နေရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံက ကျင့်သုံးတဲ့ မူဝါဒ ၃ ချက်ရှိပါတယ်။ နံပါတ် ၁ အချက်က လက်နက်ဝယ်ယူတဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ တရားမျှတမှု နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံလုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်အရ ၀ယ်ယူဖို့၊ ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ ဒေသတွင်း နဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို မထိခိုက်ဖို့၊ တတိယအချက်ကတော့ တခြားနိုင်ငံတွေ ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ဖို့ပါပဲ” လို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့် ရ ဟောင်းလီ (Hong Lei) က တရုတ်ဘာသာ နဲ့ ပြောသွားတာပါ။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်း လက်နက်လွှဲပြောင်း တင်ပို့နေတဲ့ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေ အဖြစ်နဲ့ကတော့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တင်ပို့နေ တဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း လွှဲပြောင်းတဲ့ ရုရှားနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း SIPRI အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒီ ၂ နိုင်ငံပြီးရင်တော့ ၇ ရာခိုင်နှုန်း လွှဲပြောင်းနေတဲ့ ဂျာမ ဏီနိုင်ငံ၊ ၆ ရာခိုင်နှုန်း တင်ပို့နေတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ ဗြိတိနိုင်ငံနေရာမှာ အစားထိုးဝင်လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ကတော့ ၅ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး ရှိတဲ့အကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာက မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တွေမြို့၊ ၀န်ကြီးများ အိမ်ရာအနီးရှိ ဘာဆာရာ ဘင်္ဂလီရွာမှ ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်သော သဲတင် ကား (တေပါ) တစ်စီးအား မောင်းနှင်လာသူ အောင်နိုင်ကြီး (အသက်- ၃၀ ခန့်)အား ဘင်္ဂလီ ၅၀ ခန့်မှ အကြမ်း ဖက် ရိုက်နှက် မှုကြောင့် ဒရိုက်ဘာဖြစ်သူ ဦး နိုင်ကြီး မှာ ထွက်ပြေး ခဲ့သော်လည်း နောက်မှ လိုက် လံ ရိုက်နှက် ခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ ကားအား အုတ်ခဲများဖြင့် ထုခြင်း၊ တုတ်များဖြင့် ရိုက်ခြင်းများကြောင့် လုံးဝ ပျက်စီး သွားခဲ့ ရကြောင်း သိရသည်။ ထိုကားအား ရဲများက သွားရောက် သယ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် လည်း ထိုသတင်း အား ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိဘဲ ပြဿနာ ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဟု ဖုန်းကွယ် ထားခြင်းများ ရှိနေ ဆဲဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရသည်။
တေပါကားမှာ အ၀ါရောင်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အဆိုပါ အောင်နိုင်ကြီးမှာ ကျောင်းတက်လမ်း ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ယခုအခါတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ အချိန်ခန့်က အဆိုပါ သဲတင်ကားသည် ကမ်းခြေမှ တစ်စီးတည်း ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ဘင်္ဂလီများက ၀ိုင်းပြီး အကြမ်းဖတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကိစ္စအပေါ် ဒေသခံများက မကျေမနပ် ဖြစ်လျက်ရှိပြီး ထိုသို့ အကြမ်းဖက်သူများကို တစ်စုံတစ်ရာ အရေးယူခြင်း မရှိပါက ပြဿနာ ကြီးစွာ တက်လာနိုင်ကြော်းလည်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။
ထိုသို့ ဘင်္ဂလီများ၏ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းများကြောင့် ၀န်ကြီးများ အနေဖြင့် နေအိမ်တွင် နေထိုင်ရသည်မှာ စိုးရိမ်ရဖွယ်ရှိပြီး စစ်ဆွေမြို့သူမြို့သားများ အနေဖြင့်လည်း ထိုရွာအား အရေးယူရန် တောင်းဆို သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုနေကြပါသည်။
ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ လဲလှယ်ခံရမှုကြောင့် အဓိပ္ပါယ်များ ကွဲလဲဟုဆို
မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့က သမိုင်း ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အေးချမ်းအား ရခိုင်ပြည်သူ တစ်ရပ် လုံးက ပေး အပ်သော ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ ဆုတံ ဆိပ်ကို လဲလှယ် ပေးအပ်ခြင်း ခံလိုက် ရသည့် အတွက် ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း လွှာ၏ အဓိပ္ပါယ်များ ကွဲလွဲ သွားကြောင်း ၀ံလက် ဖေါင်ဒေးရှင်းမှ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် ဆရာ သိန်းထွန်းအေးမှ ဆိုသည်။" ဆုပေးတဲ့အခါမှာ ရခိုင် လူမျိုး တမျိုးတည်း နာမည်ခံ တာ မဖြစ် ရဘူး။ သမိုင်း ပညာရှင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ အမှန် တရားကို အမှန် တရား ဖက်က မားမား မတ်မတ် တိုက်ပွဲ ဝင်ဝံ့တဲ့ သတ္တိရှင် ဆုအနေ နဲ့သာ ပေးတာ ဖြစ်တယ်။ လူမျိုးရေး ဆန်တဲ့ စကားလုံးတွေ မသုံး ဘဲနဲ့ ပညာရှင်တွေ ပေးတဲ့ စာသားမှာ အမှန် တရား ဖက်က ရပ်တည် ပေးတဲ့ သတ္တိ ရှင်လို့ သာ သုံးထား ပါတယ်။ အခု လဲလှယ်ပေး အပ်လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း လွှာ မှာတော့ ဘင်္ဂလီတွေကို သုံးထားတော့ လူမျိုးရေး ဆန်သွား တာပေါ့။ အနက် အဓိပ္ပါယ်တွေက အကုန်လုံးက ကွဲလွဲ သွားတာပေါ့။ အဲဒီ လိုဖြစ် တာဟာ ဆရာအေး ချမ်းရဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာနဲ့ မထိုက် တန်။ ဆရာ ကို လူမျိုးရေး ဆန် တယ်လို့ ကမ္ဘာက စွပ်စွဲနေ တာမှာ ဆရာကို ပိုလို့ အရုပ် ဆိုးအောင် ဖန်တီး လိုက်တာ ဖြစ်သွား ပါတယ်။ " ဟု ဆရာ သိန်းထွန်းအေးက ပြောသည်။
သမိုင်း ပညာရှင် များက သဘောတူ ထားသော အမှန် တကယ် ပေးအပ်မည့် ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း လွှာထဲ တွင် ပါဝင်သည့် logo ကအစ စာသားများ ကပါ တစ်ခုချင်းကို အနက် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် ပါရှိကြောင်း သိရ သည်။
" ပညာ ရှင်တွေရဲ့ သဘော တူညီ ချက်နဲ့ လက်မှတ် ထိုးပြီးတော့ ပေးအပ် တာဖြစ်တယ်။ လူမျိုး တစ်မျိုး လုံးကို ကိုယ်စားပြုနေ တာမှာ လူစု တစ်ခုကို ဦးဆောင်နေတဲ့ အမျိုးသားခေါင်း စဉ်တွေက လုပ်တာကို လူမျိုး တခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု တယ်လို့ သုံးသပ် ပါတယ်။ ဆရာတော် အရှင် စက္ကိန္ဒ၊ မြောက် ဦးက ဆရာ ဦးကျော်ထွန်း အောင်၊ သမိုင်းဆရာ ဦးမောင် ဗသိန်း၊ ဦးအောင်စံ၊ ဆရာအောင်လှသိန်း၊ ဆရာဦး မောင်မောင်၊ ပညာရှင် များစွာနဲ့ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး ပါတီဖြစ်တဲ့ ALD ကလည်း နှစ်ကို ဖိတ်ထား တယ်။ RNDP ကလည်း ပါတီကိုယ်စား တစ်ယောက်ဖိတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အားလုံး သဘော တူညီ တာကို အနီးကပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှ အခမ်းအနားစီစဉ်သူတွေက သူတို့လုပ်ချင်ပိုင်လုပ်လိုက်ကြတယ်။ ဒီလိုလုပ် လိုက်တာဟာ ဆရာတော်ပါအဝင် ပညာရှင်တွေကို မလေးစားရာရောက်တယ်။ အသိ အမှတ် မပြုရာ ရောက်တယ်။ " ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
သမိုင်း ပညာ ရှင်များမှ စုစည်းကာ ဒေါက်တာအေးချမ်းအား ပေးအပ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း လွှာကို အခမ်း အနားတွင် ဆရာ ဦးကျော်မောင်ထံမှ အခမ်း အနားမှူး(၂)ဦး လက်ထဲသို့ ပေးအပ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၄င်း အခမ်း အနားမှူး (၂) ဦးဖြစ်သော ဆရာ ကျားချေ(ခေါ်) ဦးသန်းထွန်းနှင့် ကိုစိုးပိုင် တို့ကိုမေးမြန်းရန် ဆက်သွယ် ခဲ့သော်လည်း အဆက် အသွယ် မရခဲ့ပေ။
ဓါးထိုးသတ်ခံရ ကျားဖြူဥက္ကဌ တူ အမှုကို မတ်လ ၂၂ ရက် နေ့တွင်ရုံးပြန်ချိန်း
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ တွင် လူသတ်မှု ကျူးလွန်သော ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ်(ပန်းဆေး ပြည်သူ့ စစ်ခေါင်း ဆောင်) ဦးကျော်မြင့် ၏တူ ရဲအောင်ထွေး (ခ) လိဖန် နှင့် အပေါင်း အပါ အိုက်ဆမ် တို့အား ယခုလ ၁၄ ရက်က မူစယ် ခရိုင် တရား ရုံး၌ ရုံးထုတ် စစ်ဆေး ပြီးနောက် ၂၂ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံ ရုံးချိန်း လိုက် ကြောင်း သိရှိ ရသည်။
မတ်ခ်ျလ ၁၄ ရက်က တရားခံအား ရုံးထုတ် စစ်ဆေးစဉ်“ ၁၄ ရက် မနက် ပိုင်း ၁၀ နာရီခွဲမှာ တရားခံ ၂ ယောက်ကို တရားရုံး ကို ခေါ်လာတယ် ၊ လုံခြုံ ရေးတော့ အပြ ည့်ပဲဗျာ၊ ရဲ ၃၀ လောက် ရှိ မယ်၊ တရားခံ ရဲအောင်ထွေး ကိုတော့ ဘာမှမမေး ဘူး ၊ အိုက်ဆမ် ကိုတော့ “မင်းကော ရှေ့ နေ ငှားပြီး အမှု လိုက်မ လား” လို့ ရုံးတော် ကမေးတော့ အိုက်ဆမ်က “ မငှားဘူး၊ မလိုက်ဘူး” ပြန်ဖြေ တယ်။ ပြီးတော့ နမ့်ခမ်း ရဲအုပ် ကျော်စိုး ၊ နမ့်ခမ်းမြို့ စာရေးတန်း ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ် ရေး မှူး ဦးစိုင်းထွန်းလှ နဲ့ နမ့်ဖတ် ကာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ကို တရားရုံးက ဆက်ပြီး မေးမြန်းတယ်” ဟု သေဆုံး သူ၏ ဆွေမျိူး တော်စပ်သူ တစ်ဦးကပြောသည်။
တရားခံ အိုက်ဆမ်နှင့် လိဖန်
နမ့်ခမ်း မြို့နယ် ဝိန်းဆာကျေးရွာ ဇာတိဖြစ်သည့် (လူသတ် တရား ခံအား ဆိုင်ကယ် မောင်းပေးသူ ) အိုက်ဆမ် ကိုလည်း နမ့်ခမ်း အာဏာပိုင် များက ယခု လဆန်း ပိုင်းက ဖမ်းဆီးရ မိခဲ့ သည်။ ကျန်တရားခံ ၂ ဦး ဖြစ်သော နမ့်ခမ်းမြို့ စာရေးတန်း ရပ်ကွက် နေ တရုတ် လူမျိူး အားကျိ နှင့် နမ့်ဖတ်ကာ မြို့နယ်နေ ကချင် လူမျိုး အားနော် တို့မှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် လျှက်ရှိရာ သက်ဆိုင် ရာမှ ဖမ်း ဝရမ်း ထုတ်ထား ကြောင်းသေဆုံး သူ၏ အမျိုး တော်စပ်သူက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
“ ရုံးချိန်းတဲ့ ၁၄ ရက်တုန်းက မူစယ်တရားရုံးမှာ မူစယ်၊ နမ့်ခမ်း ကလာရောက်စောင့်ကြည့်တဲ့ ဒေသခံ ၁၀၀ လောက် ရှိတယ်။ နေ့လည်စာ ကိုတော့ မူစယ် စက်မှုဇုံက စေတနာ ရှင်က လာရောက် ကျွေးမွေးတယ် ၊ သက်ဆိုင် ရာကနေ ဒီအမှု ကို တရား မျှတစွာ မကိုင် တွယ်ပေး ရင်တော့ အခြေ အနေက မလွယ်ဘူး ။ ကျနော်တို့တွေ ဒီအတွက် စိုးရိမ်နေကြတယ် ” ဟု မူစယ်မြို့မှ နိုင်ငံရေးပါ တီ ၀င် တစ်ဦးကပြော သည်။
ဓါးခုတ်ခံ ရသဖြင့် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သော စိုင်းလိုင်းပန် အတွက် ဆေးကုသ စရိတ် နှင့် သေဆုံးသူ မိသားစု အတွက် ငွေကြေးထောက် ပံ့မှုရ ရှိရေး လက်ကမ်း စာစောင် များကိုလည်း မူစယ်နှင့် နမ့်ခမ်းမြို့ အတွင်း ဖြန့်ဝေ နေကြ သည်ကို တွေ့ရပြီး ယခု လက်ရှိ ထောက်ပံ့ ငွေ ကျပ် သိန်းပေါင်း ၃၀ ကျော် ကောက်ခံ ရရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း လှုပ်ရှား မှု၌ပါဝင်သော လူငယ် တစ်ဦးကဆိုသည်။
မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ တရား ခံနှင့် တရားလို သက်သေ များကို ရုံးထုတ် စစ်ဆေးပြီးနောက် မူစယ် တရားရုံးမှ ယခုလ ၂၂ ရက် ထပ်မံ ရုံးချိန်း လိုက်ကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့် မှ စုံစမ်း သိရှိ ရပါသည်။
NOK AIR လေကြောင်း လိုင်းက သူတို့ ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း မဲဆောက်- ဘန်ကောက် လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို တနေ့ ၄ ကြိမ်နှုံး နဲ့ပြေး ဆွဲပေး နေပါပြီ။
ဒီလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ခရီးစဉ် အစပြုမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာတာပါ။
ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတာကတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်နှုန်းထားပါပဲ။
တကြောင်းကို တစ် လေးလုံး (၁,၁၁၁ ဘတ်) နဲ့ ပြေးမယ် လို့ ပြူးပြူးပြဲပြဲ ပြောခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ လက်မှတ်က ဘတ် ၁,၅၉၀ ဖြစ်နေပါတယ်။
အပြောနဲ့အလုပ် ဘတ်ငါးရာနီးပါး ကွာဟသော်ငြားလည်း ရွေးစရာ တခြားလေကြောင်းလိုင်းမရှိတော့ သူ့ပဲ အားကိုးရပါလိမ့်မယ်။
နယ်စပ်တံတားပေါ် ကြော်ငြာတုန်းက ဒီလို ...
ဒီခရီးစဉ်အသစ်ကို ဒေသခံတွေ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ၊ ထိုင်းမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားတွေ အသုံးပြုကြ ပါတယ်။
စတင်ပြေးဆွဲတဲ့နေ့ကနေစပြီး ဒီနေ့အထိ ခရီးစဉ်တိုင်းမှာ ခရီးသွားတွေ ပုံမှန်ရှိပါတယ်လို့ မဲဆောက်လေ ဆိပ်က လက်မှတ်အရောင်းစာရေးမတဦးက ဆိုပါတယ်။
ထိုင်းပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းလိုင်းတခုဖြစ်တဲ့ NOK AIR ရဲ့ ဈေးနှုန်း ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှုကြောင့် တချို့ လူတွေ စိတ်ပျက်သွားကြတယ်လို့ မဲဆောက်က ကုန်သည်ကြီးများအသင်းဝင် နိုင်ဆူချိုင်းက ဆိုပါတယ်။
နယ်စပ်တံတားအောက်က လက်ရှိ ကြော်ငြာ
လေယာဉ်ပျံသန်းချိန် စုစုပေါင်း - ၁း၁၅
ဘန်ကောက် ဒွန်မောင်းလေဆိပ်မှ လေယာဉ်ထွက်ချိန်များ
(ကျပ် - လေးသောင်းခွဲခန့်၊ ဒီနေ့ ဒေါ်လာဈေးနဲ့ ဆိုရင် 54 USD)
ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာဒီနှစ်ထဲမှာဘဲ မဲဆောက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကို ပြေးဆွဲ ဘို့အတွက် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။
မွန်ပြည် နယ်ကုန် သည်ကြီးများ အသင်းဝင် တဦး ကတော့ မဲဆောက်-မော် လမြိုင်ပြေး ဆွဲဘို့ NOK AIR ကစမ်း သပ်ပြီး သွားပြီး ပျံသန်းချိန် ၁၈ မိနပ်ပဲ ကြာတယ်၊ မော်လမြိုင်လေဆိပ်က အသုံးမပြု ဘဲပစ်ထား တာကြာတော့ အဆင့်မြှင့် မွန်းမံပြင်ဆင်တာတွေ အများကြီးလုပ်ရဦးမယ်လို့ မကြာခင်က ဧရာဝတီ သတင်း ဌာန ကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင် မြင်ရတော့မယ့် ခရီးသွားလာမှု
နှစ်နိုင်ငံ သဘော တူညီ ချက်အရ လာမယ့် ဧပြီ လဆန်း ကစပြီး မဲဆောက်-မြ၀တီလမ်းကနေ ရက်သတ္တ တပတ် ကြာမြှင့်မယ့် နယ်စပ်ခရီးသွားခွင့်ကို ထိုင်းနဲ့မြန်မာတွေ အပြန်အလှန် စတင်ကျင့်သုံးတော့မယ်၊
ဒါကြောင့် ထိုင်းဘက်ကနေ မဲဆောက်ခရီးစဉ်လေကြောင်းလိုင်းကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ မဲဆောက် အခြေ စိုက်ထိုင်း စက်မှု လုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်တဲ့ နိုင်ဝစ်ချိုင်းက ပြောပါတယ်။
မြန်မာ ဘက်က ခွင့်ပြုချက် အရ ဒီလမ်းကြောကနေ ထိုင်းလူမျိုးတွေ တပတ်စာခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွ န်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အထင်ကရနေရာဒေသတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြမှာပါ။
အဲဒီထဲ မှာ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ခရီးစဉ်က ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
မြန်မာတွေလည်း ထိုင်းဘက်ကို အရင်ကထက် ပိုပြီး ၀င်ရောက်လည်ပတ်ကြမှာဖြစ်ပါ တယ်။
လက်ရှိ အသုံးပြု နေကြတဲ့ လက်မှတ်က တရက်စာ ခရီးသွား လက်မှတ် ဖြစ်ပါတယ်၊ အချိန် အကန့်အသတ် ရှိတဲ့ အတွက် နေမ၀င်ခင် လာလမ်းအတိုင်း ပြန်ရပါတယ်။
သွားလာခွင့်နေရာလည်း အကန့်အသတ် ရှိပါတယ် - ထိုင်းတွေမြ၀တီမြို့တွင်းသာသွားလာခွင့်ရှိပြီး မြန်မာတွေ လည်းမဲဆောက်မြို့အတွင်းသာ လည်ပတ်ခွင့်ရတဲ့ တနေ့တာ ခရီးသွားလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
၄၉ ကြိမ်မြောက် ဆုရအနုပညာဓာတ်ပုံပြပွဲ (ဓါတ်ပုံသတင်း)
မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်ပုံအသင်းနဲ့ British Council တို့ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအသင်းရဲ့ ၄၉ ကြိမ်မြောက် မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည် ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ (ဆုရ အနု ပညာ ဓာတ် ပုံပြပွဲ) နဲ့ ဟောပြော ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ Central Hotel မှာ မတ် ၁၈ ရက်ကနေ ၂၀ ရက် အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင် တစ်ဦး တင်သွင်းသော အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး အဆို လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြု
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာ သုံးသပ်ရေး ကော်မ တီနှင့် ကော်မ ရှင်များ ဖွဲ့စည်းရေး အရေး ကြီး အဆိုကို လွှတ်တော် တွင် အတည်ပြုလိုက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာအစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်သို့ အပြည့် အဝ ကူးပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော ခြေလှမ်းတရပ်ကို စတင်လိုက်သည်။
ထို အဆိုပြု ချက်ကို အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် သူရဦးအေးမြင့် (စစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးဟောင်း) က တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ပညာရှင်များ နှင့် ဥပဒေရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် အခြေခံ ဥပဒေသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ြေ ပာင်း လဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် များ၏ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရှိလာစေရန် အတွက် သုံးသပ် ကြ မည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ က မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို တည်ဆောက်ဖို့ လက်ရှိ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တ ယ်လို့ သူုတို့ သဘောပေါက်သွားပုံ ရပါတယ်” ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းနှင့် အောက် လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်သူ ဦးအုန်းကြိုင် က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းတရပ်တွင် ဖော်ပြထား သည်။
ထိုကဲ့သို့ အဆိုကို အတည်ပြုလိုက်ခြင်းသည် ရှည်လျားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ပထမ ခြေလှမ်း တရပ်သာ ဖြစ်သော်လည်း ထိုခြေလှမ်းသည် အလွန် အရေးကြီးသည့် ဖြစ်စဉ်တခု ဖြစ် သည် ဟု လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။
အရေးကြီးသည့် မေးခွန်းတရပ်မှာ စစ်ဘက်မှ ဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် အခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်နိုင် ခဲ့လျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိမရှိ ဆိုသည့် မေးခွန်း ပင်ဖြစ် သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံခြားသား နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး သားနှစ်ဦးမှာလည်း ဗြိတိန်နိုင် ငံ သား များ ဖြစ်ကြသဖြင့် လက်ရှိ ဥပဒေအရ ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမ္မတ အဖြစ် အရွေးချယ်ခံခွင့် မရှိပေ။
အခြေခံ ဥပဒေအား ပြင်ဆင်နိုင်လျှင် သူ့အနေဖြင့် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ရနိုင်လာစရာ ရှိသည်ဟု အတိုက်အခံ ခေါင်းေ ဆာင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယုံကြည်စိတ်ချကြောင်း ယခင်က ပြောခဲ့ဖူးသည်။
“အဲဒါအတွက် ကျမ အလွန်အကျူး ပူပန်နေတာ မရှိပါဘူး။ စစ်ဘက်က သူတွေလည်း ကျမတို့ တိုင်းပြည်က တခြားသူေ တွလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ ပိုခိုင်မာပြီး ပိုသဟဇာတ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် မြင်ချင် လိမ့် မ ယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ်” ဟု သူက ဆိုခဲ့သည်။
“ဒါကြောင့် အပေးအယူလုပ် ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ပြင်ဆင်ကောင်း ပြင်ဆင်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေကို ကျမ ထည့် မ တွက်ဘဲ မနေပါဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဟာဝိုင်အီ ရှိ East-West Center တွင် ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
လက်ရှိ အခြေခံ ဥပဒေအရ ပါလီမန်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို စစ်ဘက်မှ သီးသန့် ရယူထားသည်။ လေ့လာ သူ များ က ဆိုကြသည်မှာ လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်လျှင် အနာဂတ် မြန်မာ့ အစိုးရ အဖွဲ့တွင် စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပြန်လည်သတ်မှတ် ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်က နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် လိမ့်လဲစွာ ခံစားနေရချိန်တွင် ထိုအခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) အတည်ပြု ရန် ဆန္ဒခံ ယူပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမှ ရရှိခဲ့သည့် ရလဒ်မှာ အငြင်းပွားစရာအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ဖြစ်ထိုစဉ်က အ ဓိက အတိုက်အခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)နှင့် မြေပေါ်မြေအောက် အင်အားစုများက ဆန့် ကျင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို ကြွေးကြော်သံတရပ်အဖြစ် တင်ကာ NLD သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့ သည့် ကားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်နေရာအများစု အနိုင်ရခဲ့သည်။
လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေ၏ အရေးပါလှသော ပုဒ်မများကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်း၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းေ ကျာ် ထောက်ခံပြီး ဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဖြစ်၍ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင် ခဲယဉ်းေ ကြာင်း လည်း သုံးသပ်သူအချို့က ဆိုသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, March 19, 2013, under မြင်သမျှ | No comments
ဟန်ဝင်းအောင်သည် (ထောင်၂ကြီမ်ကျ နိုင်ငံေ၇း သမား ထောင်ထွက် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ မိဘ နှစ်ပါး အဆင် ပြေတဲ့ အချိန်တုန်း ကရွေ ဆိုင် ပိုင်ခဲ့တာ မငြင်းပါ ပထမ အကြီမ် ထောင်က ထွက်ပြီးနောက် ဖခင် မရှိတော့ တဲ့အခါ မိခင်က အိမ်၏ စီပွါးရေး ကိုမကိုင်နိုင်တော့ဘဲ သမီးနဲ့ သမက်ကို ရွေဆိုင် ထိုးပေး လိုက်ရ တဲ့အဖြစ် နဲ့ ဘဝ ပျက် ခဲ့သလို မိခင် ကလဲ တွေ့သမျှ လူနဲ့ တွဲနေတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ၊ ပညာရေး ဆိုတာ (၈) တန်းတောင် မအောင်ခဲ့ ပါဘူး၊
ထောင်ကျ တာမှန်တယ် ထောင်တွင်း ရပ်တည် ချက်ဆိုတာ ထောင်ကျ သူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး မှတ်ကျောက် ဖြစ် သလို သမိုင်း လဲဖြစ်တယ်၊ ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ ထောင် တွင်း သမိုင်ကတော့၊ ထောင် ၂၉ နှစ် ကျနေတဲ့ ဦးသုမန ကို (ဘုန်းကြီး) တမ နက်မှ ဟန်ဝင်းအောင်က ဦးသုမနကို သတင်းစာ သွား ယူခိုင်းတယ် ဦးသုမ နက ဘယ်သူ ဖတ်မှာလဲလို့ မေးတော့ သူ ဖတ်ချင် လို့ပါ ဆိုတယ် ဦးသုမနက မင်းဖတ် ချင်တာ မင်း ဘာသာ သွားယူ ပေါ့လို့ ပြောပြီး အခန်းထဲက ဆင်းသွားတယ်၊ အခန်းထဲမှာ ဦးစန္ဒော ဘာသ (ဦးဇင်းကျော်) ရယ် ကိုသက် နိုင်ရယ်၊ နိုင်ဝင်း(ကိုရင်) မြစန်း ထူးရယ် လေးယောက် ရှေ့မှာ သူ့ကို အရှက်ခွဲ တယ်လို့ ဟန်ဝင်းအောင် ကပြော တာကို ထိုသူ အားလုံး အသိဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကို အာဃာတ ထားပြီး နိုင်ငံရေး အခန်း နား တခု လုပ်နေ ခိုက် ထောင်က ကိုယ့် အခန်းကို ဝင်မယ် ဆိုပြီး တံခါးတွေ ပိတ်လိုက်တယ်၊ တံခါးပိတ်ချိန် ၁၀ မီးနှစ်လောက်ကြာတော့ ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ (ထိုခန်း နားမှာ ဟန်ဝင်းအောင် တို့အုပ်စု မပါ) ဟန်ဝင်းအောင်တို့ အုပ်စုဖြစ်တဲ့ ညဏ်ကြီး ဖိုးခွါး ရဲသီဟ (လက်ဝှေ့ သမား) အားကြီး တိုအုပ်စု ဦးသုမန ၅ တိုက် ၁ ခန်းရှေ့မှာ အလုပ် လုပ်နေ ခိုက် အုပ်စု လိုက် ဝိုင်းပြီး ထိုးကြတယ်။
ဆိုင်းဘုတ်ထောင်တော့ ဦးသုမနက ထောင်ကို သတင်းပေး လို့ ဝိုင်းထိုး တာလိုပြော တယ်၊ ဦးဇင်း သိတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ဒီကောင် တွေကို တိုက်ခန်း ထဲပိတ် လိုက်ပြီး ဦးဇင်းက မကျေနပ်လို့ ထောင်မှုးကို ကွိုင်ရှာ တော့ သူတို့ကို ရက် ၂၀ တိုက်ပိတ် ထောင်ဝင်စာ ပိတ်ရက်စေ့လို့ ၅ တိုက် ကိုပြန် ရောက်တယ် ဆိုရင်
အောင် ကိုဦး အောင်ကြီးပ် အင်အားဖြည့်ပြီး ၅ တိုက်မှာ ရှိတဲ့ ဦးစန္ဒေ ဘာသ ဦးသုမန ဦးတက္ခ ကိုရင်နိုင်ဝင်း ကိုရင်ထတ် ကိုဟောက် တို့ကို ဘာမှပေး ကမ်းခြင်း ကျွေးခြင်း မလုပ်က ဟုဆိုကာ သပိတ်မှောက် တယ်လို့ ကြွေးကြော်ပါလေေ၇ာ့ ဟန်ဝင်းအောင် ဆိုတာ ထောင်မှုးထာင် ပိုင်နဲ့ ဘယ်သော အခါမှ ရှေ့ထွက်ပြီး စကား မပြောခဲ့ ဘူးဘူ၊ ပြောတဲ့ လူ တွေကိုလဲ ပြဿနာ ရှာတယ် ၊ ၂ ယောက်ရှိရင် လေးဖွဲ့ကွဲအောင်လုပ်တဲ့လူ။ လက်ပတောင်းကိစ္စမှာ ဘုန်းကြီးတွေကိုထိုးကျွေးပြီး အဲ့ဒီကောင် ဘယ်ရောက် နေလဲ အဖိနှိပ်ခံပြည် သူပြည် သားနဲ့ ရိုးသား တဲ့လူ တွေကို ထိုးကျွေးပြီး သူသာ လျှင် နာမည် ကောင်းယူတဲ့ ထောင်တွင်း ကအကျင့်နဲ့ သူ့ဝါသနာ ဖြစ်တယ်။ ဒီကိစ္စ အားလုံးကို မှန်ကန်ကြောင်း သူနဲ့ အတူနေခဲ့တဲ့ သူအား လုံးသိတယ် သေချာ သိချင်လျှင် ဖုန်းနံပတ် (၀၀၆၆)၀၈၂၂၂၈၂၆၈၄ ကို အချိန် မရွေး ဆက်သွယ် မေးမြန် နိုင်သည် ။
ပုံ ဦးဇင်းကျော်(နိုင်ကျဉ်းဟောင်း) —
From : ဦးဇင်းကျော်(နိုင်ကျဉ်းဟောင်း)
မြောက်ဦးမြို့တွင် ဘင်္ဂလီများနှင့်ပူးပေါင်းကာ စီးပွားရှာသူများ ခေါင်းထောင်လာ
ရခိုင်ပြည် မြောက်ဦးမြို့နယ် အတွင်း ဘင်္ဂလီ များနှင့် ပူးပေါင်းကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေကြ သည့် ဆိုင် သည် တချို့၏ ကုလား များကို ဆိုင်ဝန်များ အဝတ် အထည်များ ရောင်းချ နေခြင်းမှာ ပြန်လည် ဦးမော့လာ နေကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။
အဓိ ကရုဏ်း ပြီးဆုံး ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း ကာလ မှ၍ မြို့ပြင်နေ ဘင်္ဂလီ ကုလား များအား မြောက်ဦးမြို့ တွင်းသို့ ဝင်ရောက် သွားလာခွင့်ကို တားဆီးပိတ်ပင်ထားခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်များမှာ အဆက် အသွယ်ပြတ်နေခဲ့ရာမှ မြောက်ဦးမြို့မဈေးအတွင်းမှ ဆိုင်သည်များလည်း ကုလားများကို ပစ္စည်းရောင်း ချမှု လုံးဝမရှိသလောက် ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ အခြေအနေမှာ အနည်းငယ်တည်ငြိမ်နေပြီဖြစ်သဖြင့် မြောက်ဦးမြို့မဈေးမှ ဆိုင်သည်တချို့မှာ စစ် တပ်မှ စစ်သားများ၏ ဇနီးမယားများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ကုလားရွာများသို့ ပစ္စည်းရောင်းချမှုများကို လျှို့ဝှက်စွာ လုပ်ကိုင်နေ ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
" အခု သူတို့က ဘင်္ဂလီတွေအကြိုက် အထည်တွေကို ဘယ်သူမှ မရောင်းတဲ့အချိန်မှာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ရောင်း ချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာတော့ မကောင်းပါဘူး။ အစကတော့ တခြားဆိုင်တွေမှာ တင်ကျန် ခဲ့တဲ့ အထည်တွေကို ကောက်ပြီးရောင်တာပါ။ အခုတော့ ရန်ကုန်က တိုက်ရိုက် မှာယူပြီး ကိုရောင်းနေတာ တစ်နေ့ကို (၁၀) သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကို ရောင်းရတယ်လို့ ကြားတာပါပဲ။ ဦးစောသိန်း ထွန်း မိသားစုတော့ အရင်ကတည်းက ရောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ အခုသူတို့လဲ စစ်တွေကမှာပြီးတော့ ဇော်ရဲထွန်း တို့လိုမျိုး စစ်တပ်က စစ်သားမယားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကုလားရွာတွေကို ပိုနေကြပါတယ်။ " ဟု မြောက်ဦးမှ လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်နေသည့် ကိုဘမောင်ကပြောသည်။
ယင်းသို့ ဘင်္ဂလီများအား အဓိကရောင်းချနေသည့် ဆိုင်များမှာ အထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များဖြစ်သည့် ကိုနိုင်ဇော်လင်းနှင့် ကိုဇော်ရဲထွန်း တို့ဖြစ်ကြပြီး နောက်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးစောသိန်းထွန်း(ကျောင်းဆရာ အငြိမ်းစား) တို့မိသားစုမှာ ယခင်ကပင် ယင်းသို့ ဘင်္ဂလီတွေအကြိုက် အဝတ်အထည်များကို ဦးစားပေး ရောင်းချနေ ခဲ့သူများဖြစ်ပြီး ယခုနောက်ပိုင်းတွင် စစ်တွေမြို့မှ ဘင်္ဂလီအကြိုက် အထည် များကို မှာယူကာ စစ်သားမ ယားများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဆက်သွယ်လျှက် ရောင်းချနေကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ဇော်လင်းနှင့် ဇော်ရဲထွန်း တို့နှစ်ဦးမှာ အရေးအခင်းပြီးခါစတွင် တခြားဆိုင်များ၌ တင်ကျန်နေခဲ့သည့် ဘင်္ဂလီ အကြိုက် အဝတ် အထည် များကို လိုက်လံဝယ်ယူကာ စစ်သားမိသားစုများနှင့် ပူးပေါင်းရောင်း ချနေခဲ့ ရာမှ ယခုအခါ ရန်ကုန်မှ အလုံးအရင်းနှင့်မှာယူပြီး လက်သိပ်ထိုးကာ ရောင်းချလျှက်ရှိပြီး အမျိုး သားရေး အရ တခြားဆိုင်များမှ ရောင်းချခြင်းအား ရပ်တန့်ထားခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူကာ သောင်း ကျန်းနေ ကြခြင်းဖြစ် သဖြင့် တစ်ရက်ကို သိန်းဆယ်နှင့်ချီ၍ ရောင်းချနေရကြောင်း ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
Samsung Galaxy S4ကို စင်္ကာပူတွင် မေလအတွင်း ၀ယ်ယူနိုင်မည်
Samsung Galaxy S4ကို စင်္ကာပူတွင် မေလအတွင်း ၀ယ်ယူနိုင်တော့ မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Samsung Asia CEO and president Gregory Lee ကတော့ ဈေးနှုန်းကို မသတ်မှတ်ရသေးကြောင်း အရည် အသွေးမြင့် ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ဈေးကို ပေးရမှာပါလို့ ပြောခဲ့သည်။ ဈေးနှုန်း ကျွမ်း ကျင် သူများကတော့ ယခင် SIII နဲ့ Note II တို့ ဈေးနှုန်းများကဲ့သို့ $998 ပတ်လည် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆို ခဲ့သည်။
Galaxy S4 smartphone to go on sale here in May
By Sherwin Loh,
The Straits Times | 18-03-130comment
NEW YORK - The Samsung Galaxy S4Android smartphone will be available in Singapore from May, it was revealed on Friday.
The South Korean company's stores here will stock the device, which was unveiled in New York. The three major telcos - SingTel, StarHub and M1 - are also in talks to sell it.
The phone will be givenastaggered launch worldwide, with some countries getting it in April. Samsung Asia CEO and president Gregory Lee said: "We haven't decided on pricing. But it'sapremium product so it will be atapremium price."
Experts expect the cost bracket will be similar to the Samsung Galaxy S III and Samsung Galaxy Note II - which both sold for $998 and attracted queues outside stores at their sales launches here last year.
At Friday's 7am unveiling - Singapore time - the company made no mention of Google's mobile operating system, which it has used since launching its first Android phone in 2009.
Instead, the world's largest manufacturer of Android smartphones, which has sold more than 100 million units of its three Samsung Galaxy S devices, focused on the new software features of its latest device. They include gesture controls, enhanced camera functions and lifestyle elements.